भदौ १२ देखि नेपाल एयरलाइन्सको सिधा ओसाका उडान,नयाँ भाडादर कति ? - samayapost.com
भदौ १२ देखि नेपाल एयरलाइन्सको सिधा ओसाका उडान,नयाँ भाडादर कति ?
समयपोष्ट २०७६ साउन १३ गते १३:५५
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी जहाजबाट रु ३६ हजारमै जापान यात्रा तय गर्न सकिने भएको छ ।
निगमले अहिले भारतको नयाँदिल्ली, बैङ्लोर, मुम्बई, मलेशिया, सिङ्गापुर, बैंकक र कतारमा उडान भर्दै आएको छ । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हाल दुई वाइडबडी ए–३३० जहाज, दुई न्यारो बडी ए–३२० जहाज छन् ।रासस